यसकारण नवजात शिशुलाई मुटुरोगको जोखिम धेरै, सम्भव छ उपचार
डा. पुनम शर्मा बुधबार, मंसिर ८, २०७८, ०७:०३
नवजात शिशुहरुमा जन्मजात नै विभिन्न रोग देखिन सक्छन्। तीमध्ये बाल मुटुरोग अहिले आमसमस्या भएको छ।
एक सय जना शिशु जन्मँदा एकदेखि दुई जनालाई मुटुसम्बन्धी रोग हुन सक्छ। धेरैजसो मुटुरोग बच्चा ठूलो हुँदै जाँदा आफैँ ठीक हुन्छ। तर, हजार शिशुमध्ये एक जनामा जटिल खालको समस्या देखिन्छ। यस्तो समस्या भएका शिशुलाई जन्मने बित्तिकै उपचार वा शल्यक्रियाको खाँचो पर्छ।
नवजात शिशुहरुमा मुटुरोग हुनुको विभिन्न कारण छन्। यो समस्या वंशाणुगत पनि हुन सक्छ। गर्भवती भएको समयमा विभिन्न रोगको औषधि प्रयोग गरेका, मधुमेह वा उच्च रक्तचाप भएका आमाहरुले जन्माउने शिशुमा मुटुरोगको समस्या देखिने संभावना धेरै हुन्छ।
महिला गर्भवती भएको सुरुको चार हप्ताभित्र बच्चाको मुटु बनिसकेको हुन्छ। गर्भवती भएको थाहा नपाउँदै मुटु बनिसकेको हुने हुँदा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको हुँदैनन्। त्यसैले आमाको स्वास्थ्य र उनले गर्ने व्यवहारले कतिपय शिशुको मुटुमा असर गरिसकेको हुनसक्छ।
मुटुरोग भएका बच्चा जन्मने क्रममा सामान्य हुँदैनन्। उनीहरु कालो रङको देखिन्छन्। शरीरमा अक्सिजनको अभाव हुन्छ। उनीहरुलाई तत्काल उपचार आवश्यक पर्छ। त्यसो नभए मृत्यु पनि हुनसक्छ।
यसको उपचार दुई किसिमबाट हुन्छ। पहिलो, बेलुनको मद्दतले नचिरिकन गरिने शल्यक्रिया। दोस्रो, चिरेर गरिने शल्यक्रिया। कुनै बच्चामा भने यी दुई वटै उपचारको आवश्यकता पर्न सक्छ। यद्यपि, यो संभावना शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्र हुन्छ।
केही बच्चामा भने मुटुसम्बन्धी समस्या भए पनि हेर्दा सामान्य देखिन्छ। जन्मिने बित्तिकै समस्या देखिँदैन। एक वा डेढ महिनापछि भने समस्या देखिन थाल्छ। त्यसको पहिचान गर्न गाह्रो छैन।
आमाको दूध राम्रोसँग चुस्न नसक्ने, दूध खाने क्रममा छिटो–छिटो श्वास फेर्ने, दूध छोड्दै तान्ने, दूध खाने बेला एकदम पसिना आउने समस्या हुन्छ। योसँगै ती बच्चालाई निमोनिया हुने, परीक्षणका क्रममा मुटुमा फरक किसिमको आवाज आउने र तौल आवश्यकता अनुसार नबढ्ने हुन्छ। यी लक्षण देखिए अभिभावकले आफ्नो बच्चामा मुटुसम्बन्धी रोग छ कि भनेर शंका गर्नुपर्छ।
बच्चाहरुमा देखिने मुटु रोगहरुमा पनि मुटुमा प्वाल पर्ने एक आम समस्या हो। यो समस्या पनि धेरै किसिमको हुने गर्छ। मुटुमा हुने प्वाल सानोदेखि ठूलोसम्म हुन्छन्।
कुनै बच्चाहरुको मुटुमा एकदमै सानो प्वाल हुन्छ। यसले मुटुलाई खासै असर गरेको हुँदैन। कतिपय बच्चाहरु ठूलो हुँदै जाँदा ती प्वाल आफैँ बन्द पनि हुन्छन्। ती बच्चालाई हामी फलोअपमा मात्र राख्छौँ। तर, कुनै बच्चाको मुटुमा ठूलो प्वाल हुन्छ।
मुटुमा ठूलो प्वाल भएका बच्चालाई निमोनिया भइरहने हुँदा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ। उनीहरुलाई विशेष उपचारको आवश्यकता पर्छ। एकदेखि डेढ वर्षभित्रमा शल्यक्रिया गरेर ती ठूला प्वाल बन्द गर्नुपर्छ। धेरै ढिलो भए प्वाल बन्द गर्न नसकिने हुन्छ। यो समस्या भएका बच्चाहरु चिकित्सकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनै पर्छ।
एक्सरे, इसिजी गरेर पनि मुटुको अवस्था हेर्न सकिन्छ। तर, रोगको निदान गरी उपचार चाहिने वा नचाहिने पत्ता लगाउन भने बच्चाको ‘इको कार्डियोग्राफी’ नै गर्नुपर्छ। इको कार्डियोग्राफी गरेपछि मात्र समस्याको अवस्था र उपचारको किसिमबारे चिकित्सकले सल्लाह दिन्छन्।
यस्तो समस्या भएका बालबालिकाका अभिभावकले उनीहरुको खानपान र पोषणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सामान्य बच्चालाई भन्दा पोषणको बढी खाँचो पर्छ।
मुटुरोग भएका बालबालिकाहरु जीवनभर अस्पताल धाइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन। मुटुमा भएका प्वाललाई समयमै बन्द गर्न सक्यौँ र फोक्सोको दबाब सामान्य भयो भने औषधि खाइरहनु पर्दैन। सुरुको दुई/चार वर्ष फलोअपका लागि आउनु परे पनि पछि नपर्ने हुन्छ।
यी समस्या सुरुमै पहिचान भए धेरैजसो निको पार्न सकिन्छ। उनीहरु विभिन्न खेलमा भाग लिन सक्ने र एक स्वस्थ मानिस सरह जीवन जीउन सक्ने हुन्छन्। तर, ढिलो भयो भने मात्र समस्या जटिल बन्दै जान्छ।
जोखिममा रहेका गर्भवतीहरुले शिशुको मुटुमा समस्या भएको वा नभएको जाँच गर्न सकिन्छ। ती महिलाले ‘फिटल इको’ गरेर पेटभित्रको शिशुमा मुटुरोग छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ। सबै गर्भवतीका लागि यो आवश्यक छैन। तर, जोखिम समूहमा रहेका गर्भवतीले भने फिटल इको गराउनुपर्छ। १८ देखि २२ हप्तासम्ममा फिटल इको गर्न सकिन्छ। नेपालमा यो सुविधा भित्रिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ।
यदि कुनै महिलाले सन्तानको योजना बनाउँदै छिन् भने विभिन्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। मधुमेहको समस्या भएका महिलाको चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। छारेरोग, रगत पातलो बनाउने औषधि, मुटुदेखि विभिन्न रोगको उपचार गरिरहेका महिलाले बच्चाको विकासलाई असर नगर्ने किसिमको औषधि खानुपर्छ।
जन्मजात मुटुरोगको यकिन कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। ८० देखि ८५ प्रतिशतमा हुने जन्मजात मुटुरोगको कारण थाहा हुँदैन। त्यसैले पनि यसको रोकथाम चुनौतीको विषय हो। यद्यपि, जोखिम समूहमा पर्ने महिलाले विशेष ध्यान दिनैपर्छ।
हुन त मानिसहरु अहिले यो रोगप्रति सचेत हुँदै गइरहेका छन्। धेरै ठाउँमा यसको परीक्षण तथा उपचार हुने भएकाले पनि यो रोग प्रारम्भिक अवस्थामै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसको निदान हुने क्रम पनि केही बढ्दै गइरहेको छ।
निजी अस्पतालहरुमा पनि यो रोगको उपचार सुविधा छ। सहिद गंगालाल हृदय केन्द्र र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा शल्यक्रियासहितको उपचार हुन्छ। गंगालाल अस्पतालमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको भर्ना गर्नु परे उपचार निःशुल्क हुन्छ।
(बाल मुटुरोग विशेषज्ञ डा. शर्मा सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा कार्यरत छिन्।)
किन लिँदैछ हैजाले ज्यान? गएको असोज १८ गते कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बहादुरगंजस्थित शिवराज अस्पतालमा एकाएक बिरामीको चाप बढ्न थाल्यो। साँझ ८ बजेदेखि आउन थालेका सबै... आइतबार, मंसिर ५, २०७८
आहा रुबिभ्याली! जाने होइन त घुम्‍न? [फोटोफिचर] बागमती प्रदेशको विकट पहाडी भूभागमा पर्ने रुबिभ्यालीमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनका लागि स्थानीयस्तरबाट विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन गर... बुधबार, मंसिर १, २०७८
बिरानो बनाइन थालेका बाङ्देल : किन बिर्सन मिल्दैन लैनसिंहलाई? साहित्यका माध्यमबाट होस् या आधुनिक कला सिर्जनामार्फत्, अथवा नेपाली मूर्तिकलाको इतिहास लेखेरै किन नहोस्, लैनसिंह बाङ्देलले आफ्नो छोटो... शनिबार, कात्तिक २७, २०७८
‘ओमिक्रोन’बाट सुरक्षित रहन आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन सोमबार, मंसिर २०, २०७८
कांग्रेस प्रदेश अधिवेशन : सभापतिमा संस्थापनकै वर्चस्व सोमबार, मंसिर २०, २०७८
सिनेमा हलमा नचलेका नेपाली फिल्म युट्युबमा किन ‘हिट’ हुन्छन्? सोमबार, मंसिर २०, २०७८
आजको मौसम : यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना सोमबार, मंसिर २०, २०७८
कांग्रेस लुम्बिनीको सभापतिमा अमरसिंह पुन विजयी सोमबार, मंसिर २०, २०७८
नेपाल लाइभ समाचार [२०७८ मङ्सिर १९] आइतबार, मंसिर १९, २०७८
कांग्रेसको प्रदेश निर्वाचनमा कतै गठबन्धन, कतै त्रिपक्षीय भिडन्त शनिबार, मंसिर १८, २०७८
नेपाल लाइभ समाचार [२०७८ मङ्सिर १८] शनिबार, मंसिर १८, २०७८
कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताले नेतृत्वलाई औँला ठड्याउन सक्छ, चुनौती दिन सक्दैन : हरिहर विरही बिहीबार, मंसिर १६, २०७८
नेपाल लाइभ समाचार [२०७८ मंसिर १६] बिहीबार, मंसिर १६, २०७८
राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी, कमल थापा पराजित आइतबार, मंसिर १९, २०७८
गण्डकी कांग्रेस सभापतिमा पौडेलपक्षका शर्मा विजयी आइतबार, मंसिर १९, २०७८
शेखरको प्रस्ताव : जिल्ला सभापतिको सुझाव सुनेर संस्थापनइतरको एकल उम्मेदवार तय गरौं आइतबार, मंसिर १९, २०७८
पराजित भएपछि कमल थापाले लेखे- निर्मल निवासको नांगो हस्तक्षेपको भर्त्सना गर्छु आइतबार, मंसिर १९, २०७८
कांग्रेस प्रदेश अधिवेशन : लुम्बिनीमा पौडेल पक्षको प्यानलकै अग्रता आइतबार, मंसिर १९, २०७८
दास र अराजकहरुले पार्टी बनाउँदैनन् : नारायणकाजी श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
हामीले एमाले स्वीकार गर्‍यौं, एमाले नेता-कार्यकर्ताले हामीलाई अनुमोदन गरे : लेखराज भट्ट [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
कसको पक्षमा कति मत छ भन्ने कुरा मतदानपछि थाहा हुन्छ: भीम रावल [अन्तर्वार्ता] नेपाल लाइभ
व्यवस्थामै खतरा निम्त्याउने घातक अभ्यास नेपाल लाइभ
कस्तो होला सौराहाबाट फर्किएको एमाले? रामेश्वर बोहरा
सङ्‍कटमा न्यायालयको अस्तित्व शोभाकर बुढाथोकी
मुलुकको नजर हामीमाथि छ घनश्याम भूसाल
यसकारण नवजात शिशुलाई मुटुरोगको जोखिम धेरै, सम्भव छ उपचार बुधबार, मंसिर ८, २०७८
किन लिँदैछ हैजाले ज्यान? आइतबार, मंसिर ५, २०७८
आहा रुबिभ्याली! जाने होइन त घुम्‍न? [फोटोफिचर] बुधबार, मंसिर १, २०७८
भीम रावलले शपथ अस्वीकार गरेपछि ओलीले भने– अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ मंगलबार, मंसिर १४, २०७८
२१ वर्ष अघिको महाधिवेशन : गिरिजालाई देउवाको हाँक शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८
ओलीका लागि मरिमेट्ने तीन पात्र, जो केन्द्रीय कमिटीमै अटाएनन् सोमबार, मंसिर १३, २०७८
मिलनको अपरिपक्वता शनिबार, मंसिर १८, २०७८